कोरोना कहरमा ज्योतिष हरिहर अधिकारीको नजर, : “असार २१ गतेपछि सहज हुन सक्छ” (भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-१९ ले संसारलाई नै प्रभावित बनाइरहेको अवस्था छ । संसारका अधिकांश देशहरुले संक्रमण रोक्नका लागि आफ्नो देश लकडाउन गरेका छन् ।नेपालमा पनि लकडाउन लागू गरिएको आज ७० औं दिन । सरकारले आगामी जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले जनजीवन प्रभावित त बनिरहेको छ नै यो सँगै मानिसहरुमा मानसिक तनावहरु पनि बढ्दो छ । यो समयमा सबैको मानसपटलमा खेलिरहेका २ प्रश्न हुन्, कोरोना कहर कहिलेसम्म ? लकडाउन कहिलेसम्म ?मानिसहरु यिनै प्रश्नहरु लिएर ज्योतिषहरुलाई तारन्तार प्रश्न गरिरहेका छन् । मानिसहरुको प्रश्नहरुलाई समेट्दै ज्योतिष हरिहर अधिकारीले आफ्नो केही कुराहरु राखेका छन् । उनी यो संकट असारको दोस्रो हप्ता अर्थात् असार २१ गते पछाडीबाट माहोल केही सहज बन्दै जाने बताउँछन् । त्यस्तै यस्ता खालका विवाद तथा समस्याहरु पूर्ण रुपमा सामान्य हुन भने लगभग दशैं तिहारसम्म लाग्न सक्ने सम्भावना देखेको पनि उनी बताउँछन् ।उनी भन्छन् , ‘यस्तो संकट हाम्रो देशमा मात्र नभई संसारका विभिन्न राष्ट्रहरुमा पनि समस्याहरुको रुपमा आइरहेको छ । हाम्रो देशमा रोगको समस्यासँगै राष्ट्रियता, जातियता जस्ता विभिन्न खालका समस्याहरु दिनप्रतिदिन उत्पन्न भइरहेको छ । यसको लागि पनि हामी असार २१ गतेसम्म शान्त रहौं ।’ आखिर यी सबैकुरा शान्त भएर हामी कहिलेबाट एउटा राम्रो तरिकामा अगाडी बढ्छौ भन्ने मानिसहरुलाई लागिसक्यो ।अब त यति धेरै समस्याहरु बढ्न थालिसक्यो कि मेडिटेसनले पनि काम गर्दैन । हिजो अस्तिसम्म हामी तपाईंहरुलाई मेडिटेसन गर्नुहोस् , ध्यान दिनुहोस् जसका कारण हामी तनाव मुक्त हुन्छौं भन्ने एउटा विकल्प निकालिरहेका थियौं । विहान राम्रो खाना खानुहोस्, शारीरिक व्यायममा ध्यान दिनुहोस् भन्थ्यौं तर अब यि सबै कुराले काम गर्न छोड्ने भइसक्यो । कारण घरमा खानेकुरा सकिन लागि सक्यो । कमाउने ठाउँ छैन घरमा खाने चीज सकिन लागि सक्यो मेडिटेसन गरेर के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नहरु आउन थालिसक्यो ।यसरी चारैतिरबाट समस्याले घेरिरहेको छ किसानहरुले खेतीपाती गर्ने ठाउँमा पनि एकप्रकारको नचाहिने सलह नामक किरा आएर तहस नहस पार्न लागि सक्यो जताबाट पनि निराशा मात्र प्राप्त भइरहेको छ ।’ लकडाउनका कारण सबै क्षेत्रहरु बन्द छन् । बच्चाहरु स्कुल जान पाएका छैनन् । दुई महिनादेखि एउटै कोठामा थुनिएका छन् । उनीहरुमा मानसिक तनाव बढिरहेको छ । यतिसम्म कि ११ वर्षको बच्चाले दुई चोटीसम्म आत्महत्याको प्रयास गरेको फोन आफुलाई आएको हरिहर बताउँछन् ।यस्तो खालका घटनाहरुले भनेपछि अब हामी कस्तो स्थितिमा पुग्न लागेका छौं ? उनी भन्छन्‘ अब मानिसहरु काम गर्न जान पाउँनु पर्छ । सरकारको निर्णय लकडाउन एकतर्फि ठिक छ तर अर्को तर्फ पनि हामीले अब विकल्प सोच्नुपर्छ । तपाईंहरुलाई जस्तै गरी अब सरकारलाई नै टिप्स दिने अवस्था आएको छ । सम्पूर्ण संस्था नै एकबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ जहिले यसरी रोगसँग डराएर हुदैन । कति दिनसम्म रोगबाट डराउने भन्ने कुरा हुन्छ ? केही विकल्प खोजौं संसारमा विभिन्न चीजहरुको आविष्कार भएका छन् । त्यसरी नै हामी कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि पनि केही चीजको आविष्कार गर्न जरुरी छ । औषधीको पाटो छुट्टै छ तर मास्क, स्यानिटाइजर, पञ्जा जस्तै अरु चीजहरु पनि त होलान् नि ? यसरी हामी अब आफ्नो काममा लाग्नु प¥यो । किन भने अबको समय भनेको भोकमारीको हो । यी कुरा सरकार साथै सर्वसाधारणले पनि बुझ्न आवश्यक छ । लकडाउन खुल्यो भन्दैमा हुल बाँधेर निस्कनु भएन काममा जाँदा संयमता अपनाउनु प¥यो । र म चाहन्छु कि यो लकडाउनले सबैको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन होस् । लकडाउनले तपाईंको बानी राम्रो बनाओस् ।’https://youtu.be/l8Q0xyQCWxY
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १२:२५
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-१९ ले संसारलाई नै प्रभावित बनाइरहेको अवस्था छ । संसारका अधिकांश देशहरुले संक्रमण रोक्नका लागि आफ्नो देश लकडाउन गरेका छन् ।
नेपालमा पनि लकडाउन लागू गरिएको आज ७० औं दिन । सरकारले आगामी जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले जनजीवन प्रभावित त बनिरहेको छ नै यो सँगै मानिसहरुमा मानसिक तनावहरु पनि बढ्दो छ । यो समयमा सबैको मानसपटलमा खेलिरहेका २ प्रश्न हुन्, कोरोना कहर कहिलेसम्म ? लकडाउन कहिलेसम्म ?
मानिसहरु यिनै प्रश्नहरु लिएर ज्योतिषहरुलाई तारन्तार प्रश्न गरिरहेका छन् । मानिसहरुको प्रश्नहरुलाई समेट्दै ज्योतिष हरिहर अधिकारीले आफ्नो केही कुराहरु राखेका छन् । उनी यो संकट असारको दोस्रो हप्ता अर्थात् असार २१ गते पछाडीबाट माहोल केही सहज बन्दै जाने बताउँछन् । त्यस्तै यस्ता खालका विवाद तथा समस्याहरु पूर्ण रुपमा सामान्य हुन भने लगभग दशैं तिहारसम्म लाग्न सक्ने सम्भावना देखेको पनि उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन् , ‘यस्तो संकट हाम्रो देशमा मात्र नभई संसारका विभिन्न राष्ट्रहरुमा पनि समस्याहरुको रुपमा आइरहेको छ । हाम्रो देशमा रोगको समस्यासँगै राष्ट्रियता, जातियता जस्ता विभिन्न खालका समस्याहरु दिनप्रतिदिन उत्पन्न भइरहेको छ । यसको लागि पनि हामी असार २१ गतेसम्म शान्त रहौं ।’ आखिर यी सबैकुरा शान्त भएर हामी कहिलेबाट एउटा राम्रो तरिकामा अगाडी बढ्छौ भन्ने मानिसहरुलाई लागिसक्यो ।
अब त यति धेरै समस्याहरु बढ्न थालिसक्यो कि मेडिटेसनले पनि काम गर्दैन । हिजो अस्तिसम्म हामी तपाईंहरुलाई मेडिटेसन गर्नुहोस् , ध्यान दिनुहोस् जसका कारण हामी तनाव मुक्त हुन्छौं भन्ने एउटा विकल्प निकालिरहेका थियौं । विहान राम्रो खाना खानुहोस्, शारीरिक व्यायममा ध्यान दिनुहोस् भन्थ्यौं तर अब यि सबै कुराले काम गर्न छोड्ने भइसक्यो । कारण घरमा खानेकुरा सकिन लागि सक्यो । कमाउने ठाउँ छैन घरमा खाने चीज सकिन लागि सक्यो मेडिटेसन गरेर के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नहरु आउन थालिसक्यो ।
यसरी चारैतिरबाट समस्याले घेरिरहेको छ किसानहरुले खेतीपाती गर्ने ठाउँमा पनि एकप्रकारको नचाहिने सलह नामक किरा आएर तहस नहस पार्न लागि सक्यो जताबाट पनि निराशा मात्र प्राप्त भइरहेको छ ।’ लकडाउनका कारण सबै क्षेत्रहरु बन्द छन् । बच्चाहरु स्कुल जान पाएका छैनन् । दुई महिनादेखि एउटै कोठामा थुनिएका छन् । उनीहरुमा मानसिक तनाव बढिरहेको छ । यतिसम्म कि ११ वर्षको बच्चाले दुई चोटीसम्म आत्महत्याको प्रयास गरेको फोन आफुलाई आएको हरिहर बताउँछन् ।
यस्तो खालका घटनाहरुले भनेपछि अब हामी कस्तो स्थितिमा पुग्न लागेका छौं ? उनी भन्छन्‘ अब मानिसहरु काम गर्न जान पाउँनु पर्छ । सरकारको निर्णय लकडाउन एकतर्फि ठिक छ तर अर्को तर्फ पनि हामीले अब विकल्प सोच्नुपर्छ । तपाईंहरुलाई जस्तै गरी अब सरकारलाई नै टिप्स दिने अवस्था आएको छ । सम्पूर्ण संस्था नै एकबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ जहिले यसरी रोगसँग डराएर हुदैन । कति दिनसम्म रोगबाट डराउने भन्ने कुरा हुन्छ ? केही विकल्प खोजौं संसारमा विभिन्न चीजहरुको आविष्कार भएका छन् । त्यसरी नै हामी कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि पनि केही चीजको आविष्कार गर्न जरुरी छ । औषधीको पाटो छुट्टै छ तर मास्क, स्यानिटाइजर, पञ्जा जस्तै अरु चीजहरु पनि त होलान् नि ? यसरी हामी अब आफ्नो काममा लाग्नु प¥यो । किन भने अबको समय भनेको भोकमारीको हो । यी कुरा सरकार साथै सर्वसाधारणले पनि बुझ्न आवश्यक छ । लकडाउन खुल्यो भन्दैमा हुल बाँधेर निस्कनु भएन काममा जाँदा संयमता अपनाउनु प¥यो । र म चाहन्छु कि यो लकडाउनले सबैको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन होस् । लकडाउनले तपाईंको बानी राम्रो बनाओस् ।’
ज्योतिष हरिहर अधिकारी
Prevमेलम्ची आयोजनाको जग्गा अतिक्रमित, सरोकारवालाको ध्यान गएन
मनोवैज्ञानिक त्रासमा छन् अमेरिकामा नेपालीNext